Quruxda dariiqa American: Marchesa Pre-Fall 2016 loogu talagalay gabdhihii sharafta leh
Fashion Haweenka Fashion News
Cunto-darrada Marchesa Pre-Fall 2016 - waa noocyo qurux badan oo qurux badan. Sidaa daraadeed naqshadeeyayaasha caanka ah ee Keren Craig iyo Georgina Chapman waxay siiyeen abaalmarin matxafkooda - Louise Casati, Marquise di Roma. Dhowr asturan oo qoyaan leh oo dhadhan aan caadi aheyn, Picasso saaxiibkiisa, Bakst iyo Poiret ayaa hubaal ka heleen dhowr waxyaalood oo ka soo jeeda Marchesa. Maalmaha fasaxyada kirismaska, fasalada yaryar waxay ku soo bandhigaan haweenka moodada ah inay ku qurxiyaan dharka quruxda badan ee raaxada leh jidka iyo dharka. Dareemo ka samaysan qumbaha hawadu oo ay weheliyaan saraan korkiisa ah, oo si xushmad leh loogu qurxiyo lakabka, naqshadaynta iyo xargaha - xal lagu guuleysto oo loogu talagalay sawirka "boqortooyada".
Maqaayad midab ah ayaa lagu matalaa nadiif ah oo qummaatiga ah - qiiqa madow, budada, dahabka dahabka ah, iyo "triad classic" - carmine, baraf cad iyo anthracite. "Tilmaamaha" waxaa lagu doortaa naqshadeeyayaasha si tayo leh, iyada oo la tixgelinayo isbeddellada casriga ah ee sannadka 2016 -ka ah ee tubta, emerald iyo feeraha.
Xitaa muraayadaha casriga ah iyo quruxda qaaliga ah-waxay ka faa'iidaystaan ​​martida tarjumaadda Marchesa si ay uga mahadceliso cutubka aan la qiyaasi karin, khadadka fudud ee silhouette iyo tayada jilicsan ee dharka.
Ururinta ayaa dhawaan u muuqan doonta boutiques calaamadeysan Marchesa iyo dukaamo badan oo caanka ah ee Maraykanka.
Madow, casaan iyo caddaan ah waxqabadka Marchesa - oo ah classic of raaxo
"Dharka dharka gabadha" leh dhar xargo iyo maro jilicsan - riyooyin kasta oo dumarka ah
Dareemidda dahab, miisaan la'aan ah casaan cirro leh, jilicsanaanta caleemaha - Xalalka midabka Marchesa marwalba
Nooca shirkadda ee dharka isboortiska ee Marchesa - oo ah waxyaalo badan oo ah qurxinta xargaha iyo qaababka daabacan
Magaalada Moscow, oo ah urur cusub oo ka mid ah magaca dhalinyarada da'da yar ee Ruushka Lilas
Anna Wintour ayaa go'aansaday in ay bedesho qaabka?
Hooska xiga ee Karl Lagerfeld ee Paris
Welwelka England ee ku saabsan ururinta cusub ee burberry hor-deyr 2016
Bandhigidda Miraayadaha Cartierery
Petro Soroka oo ah naqshadeeye casri ah
Reese Witherspoon waxay abuurtay calaamad u gaar ah
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada alaabta caagagga ah
Daaweynta degdega ah ee hargabka caadiga ah ee daaweynta dadweynaha
Pear Fresh iyo qoryaha la dubay
Chit-chat kula yaanyada
Abaalmarinta Artist Natalka Karpa
Nolol dhedhexaad ah: markaad u dabaaldagto Honey Spas
Talooyinka loogu talagalay soo saarida cuntada si ay miisaanka u lumiso
Kalsooni darro iyo doorkeeda ku aaddan is-barashada dhalinyarada
Koofiyadaha jilicsan ee jilicsan 2016
Waxaan diyaarinnaa julienne delicious leh hilibka digaaga iyo boqoshaada
Sida loo sameeyo boodhka sawir qaadashada
Wiilkaygu wuxuu u maleynayaa inuusan u qalmin
Qiyaasta khiyaamo qaran: sida loo ogaado haddii ninkeedu ama xaaskiisa isbedelo
Miyuu arki karaa waxyeelo ku salaysan dareemo?
Hababka looga saaraayo timaha wajiga aan la rabin
Sidee loo badbaadiyaa guriga guriga?
Mobbing, cilmi nafsiga cilmiga nafsiga ah ee goobta shaqada iyo hababka looga gudbi karo